Samsung သည် Galaxy S7 ကို MWC 2016 တွင်ပြသခဲ့သည် Androidsis
Alexis Martinez | | UHI, NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်၌လာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက်ကောလာဟလများကိုစတင်မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကွန်ဂရက်စတင်သည့် Mobile World Congress ကိုစတင်မည်။ ဘာစီလိုနာ၌ထပ်မံကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထွက်ရှိလာမည့်မိုဘိုင်းကဏ္ related နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်စေရန်သန်းနှင့်ချီသောလူများစုရုံးလာကြသည်။
ထို့အပြင်ကွန်ဂရက်၏မီဒီယာဆွဲယူမှုကိုအားသာချက်ယူပြီးကဏ္ take ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးသည်ကွန်ဂရက်၏နေ့ရက်များအတွင်းဘာစီလိုနာတွင်ရှိပြီးဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုတင်ပြရန်ကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခြားထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သော ASUS, Sony, HTC သို့မဟုတ် Samsung ကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်လုပ်သူများထံမှထုတ်ကုန်အသစ်များ၏တင်ဆက်မှုများကိုတွေ့ရသည်။
Samsung က Mobile World Congress မစတင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းသူတို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုတင်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကျော်ကြားသော Unpacked သည်ကွန်ဂရက်စ်သို့ ဦး တည်နေသည့်ထူးခြားသည့်ဖြစ်ရပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူသည် Galaxy မျိုးဆက်အောက်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းမျိုးဆက်သစ်ကိုပြသသောကြောင့်မျှော်လင့်ချက်များစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂၀၁၆ တွင် MWC ရှိ Samsung Galaxy S7?
Galaxy S5, Galaxy S6 နှင့် S6 Edge, နှင့်ယခု Galaxy S7 ။ အရာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဖော်ပြသည်။ Samsung ကဘာစီလိုနာတွင်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်သည်။ အနာဂတ်ကိုရီးယား terminal နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ကြရသော်လည်းအာရှကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ terminal ကိုမြို့တော်တွင်တင်ဆက်မည်လားဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိခဲ့သည်။
တွစ်တာလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလအသစ်သည်၎င်းကိုဖော်ပြသည် Samsung မှဖြန့်ချိပြီးသည့်နောက်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်၊ 21 တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်MWC မစခင်တစ်ရက်အလိုမှာ။ ဒါကြောင့်ကောလဟာလမှန်ရင် Samsung ကဒီပွဲကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ပြင်ဆင်နေမှာပါ။
“ အစောပိုင်းကြေငြာချက်” ကိုမေ့လိုက်တယ်…ဘာမှမပြောင်းလဲ… https://t.co/J9TQXxJPSz ???? # galaxys7 # galaxys7edge #နောက်ထပ် #အခြား pic.twitter.com/ZgdYFADwGE
- Ricciolo (@ Ricciolo1) နိုဝင်ဘာလ 11, 2015
ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ Galaxy S7 နဲ့ S7 Edge အသစ်ကိုသင်တွေ့နိူင်ပြီဖြစ်သည်။ အရ ပထမကောလဟာလများ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကအနာဂတ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Processor အသစ်ရှိမယ်လို့ပြောကြတယ် Exynos 8890, ၅'၂ မျက်နှာပြင် နည်းပညာနှင့်အတူ အင်အားစု Touch ကို နှင့် QHD resolution၊ RAM ကို4GB အထိသိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှုပမာဏတို့ဖြင့် memory ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည် microSD ကဒ်အထိုင်ကင်မရာ 20 အမတ် Sony ၏အာရုံခံကိရိယာအသစ်၊ USB-C အမျိုးအစား port၊ လက်ဗွေဆင်ဆာနှင့်အမြန်အားသွင်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်လာမည့် Samsung terminal ၏ကောလာဟလသတင်းများဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်နှင့်မတူသောအနာဂတ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရမည်။ ငါတို့ဘက်မှလည်း Samsung သည်ဘာစီလိုနာတွင် Samsung ၏အထင်ကရနေရာကိုပြန်တွေ့ချင်သည်။ ပြီးတော့သင်, မင်းဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » UHI » Samsung သည် Galaxy S7 ကို MWC 2016 တွင်ပြသခဲ့သည်
Doze အက်ပလီကေးရှင်းသည် Marshmallow ၏ဘက်ထရီချွေတာမှုများကို Lollipop ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းသို့သယ်ဆောင်သည်